Cayaaryahanka Pierre-Emerick Aubamayeng - BBC Somali
Cayaaryahanka Pierre-Emerick Aubamayeng
Pierre-Emerick Aubamayeng waxaa uu sanadkii 2aad oo xiriir ah soo galay liiska la soo xulay ee BBC waxayna taasi sheegaysaa wax kasta oo ku saabsan qaabkiisa ciyaareed inuu yahay midka keliya ee shanta musharrax ee isagu sanadkan aan ku jirin tartankii koobka adduunka eek a dhacay dalka Brazil.
Waxaa laga yaabaa inuu seegay tartankii kubbadda cagta ee adduunka ugu weynaa laakiin maqnaashihii dalka Gabon waxay u suurta gelisay laacibkooda ugu fiican kubbadda cagta inuu helo waqti dheer oo uu ku nasto.
Xilli-ciyaareedkii ka horreeyay waxaa uu ka caawiyay kooxda Borussia Dortmund inay kaalinta 2aad ka gasho tartanka horyaalka Jarmalka ee Bundesliga iyo koobka Jarmalka oo labadaba ay isku darsatay kooxda Bayern Munich – iyo inay soo gaarto siddeedda kooxood ee isugu soo haray koobka Champions League, oo ugu dambaystay ay reebtay kooxda horyaalkaas qaadday ee Real Madrid.
Kaddib markii uu tartanka Bundesliga ka dhaliyay 13 gool, Aubameyang waxaa uu soo baxay mid duulaya qaybtii hore ee xilli-ciyaaradka, isagoo gurigii aaday iyadoo Borussia ay Bayern uga badisay 2-0 koobka weyn ee Jarmalka ee furitaanka xilli-ciyaareedka.
Wax uu Aubameyang ku sheegay qaabkii ugu fiicnaa ee abid uu tartan ku bilaabo, afartiisii ciyaarood ee ugu horreeyay tartanka horyaalka Bundesliga saddex gool ayuu ka dhaliyay.
Waxaa kaloo lagu doodi karaa inay ka sii muhiimsan tahay qaabka horumarsan, oo isagu ka dheeli kara weerarka ama baalasha.
Xilligii ugu horreeyay ee kooxda Dortmund, inta badan keydka ayuu fadhin jiray ciyaaraha waaweyn laakiin fursad ayaa u soo baxday markii uu weeraryahankii Robert Lewandowski u wareegay Bayern isla markaana uu dhaawac gaaray wideman Marco Reus, Aubameyang fursaddiisa ayuu ku dhegay.
Kaddib markii uu hal gool oo keliya dhaliyay sagaal ciyaarood oo ka tirsan horyaalka Jarmalka, waxaa uu bilaabay inuu aamusiyo wixii su’aalo ah ee k a taagnaa kartidiisa isagoo saddex gool u dhaliyay Dortmund saddex ciyaarood oo kooxo ay la yeelatay xilligan.
Waxaa uu ku dhashay France hase yeeshee waxaa uu doortay inuu u ciyaaro dalkii uu aabbihiis ka yimid ee Gabon, macallinkkiisa reer Gabonewaxaa uu sheegay in horumarka uu ciyaarta ka sameeyay ay sabab u tahay isagoo hadda Af Jarmalka si fiican u fahmi karaya.
“Xeelad ahaan, ma awoodi Karin inaan sameeyo waxa uu tababare Jurgen Klopp iga rabay inaan sameeyo xilli-ciyaareedkii hore waayo luuqadda ma fahmi Karin waxayna ii ahayd adduunyo cusub ,” ayuu u sheegay website-ka rasmiga ah ee Bundesliga horraantii bishii Oktoobar.
Isagoo la qabsaday isla markaana degay kaddib markii lagu soo iibsaday £13m bishii July 2013, laacibkaas hore ee Saint Etienne waxaa uu ugu dambaystii noqday mid si joogto ah ugu safta kooxdiisa sanadkii 2013 tartanka horyaalka Yurub kaalinta 2aad ka gashay oo uu ka mid noqday 11-ka ciyaarta lagu bilaabo.
Ka warran AC Milan, oo laacibkaas dheereeya ee gool dhalinta u gaajoonaya u oggolaatay inuu ka tago kaddib markii uu carruurnimadiisii ku soo qaatay naadigaas, Aubameyang waxaa uu tusay in go’aankoodii uu khalad ahaa.
iyo Caalamiyan, oo weeraryahanka uu dalka Gabon ay u soo dagaalanto booskeeda cayaaraha 2015 ee koobka final qaramada qaaradda Africa, kadib markii uu laba gool oo muhiim u ahaa in Burkina Faso ay ka badiyaan uu isagu dhaliyay bishii October.